သင်နောင်တမရမီ Olymp Trade တွင် SMA ကို နားလည်ပါ။
100% ဘောနပ်စ်ကို အသက်သွင်းပါ။
Zig Zag အညွှန်း
စကားဝှက်တစ်ခု သင့်ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါမည်။
ကြိုဆိုပါတယ် အကောင့်တစ်ခုအတွက် စာရင်းသွင်းပါ။
အိမ်ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာသင်နောင်တမရမီ Olymp Trade တွင် SMA ကို နားလည်ပါ။
အားဖြင့် Subhamcare ၃
မတ္ ၁၆၊ ၂၀၂၂
(နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့- မတ္ ၁၆၊ ၂၀၂၂)
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု အကောင်းဆုံးညွှန်းကိန်းများကို ပေးဆောင်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် SMA သို့မဟုတ် ၎င်းကို ရိုးရိုးရွေ့လျားပျမ်းမျှဟုလည်း ခေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် လက်ရှိလမ်းကြောင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြောင်းပြန်လှန်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းသစ်ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသောရွေ့လျားမှုပျမ်းမျှအား သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း လုံခြုံရေးတစ်ခု၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤညွှန်ကိန်းကို ကုန်သည်များက တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုသော်လည်း၊ Sma တစ်ခုတည်းက သင့်အား တိကျသောဒေတာကို ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း မှတ်သားထားရန်လိုသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ သင်တိုတောင်းသောအချိန်ဘောင်ဇယားတွင် သင်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည့် SMA ဖြစ်သည့် SMA7နှင့် SMA 21 ကို အတူတကွအသုံးပြုနည်းကို ကျွန်ုပ်ဖော်ပြပါမည်။
Olymp Trade Platform တွင် SMA7နှင့် SMA 21 ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။
သင့်ထံဝင်ရောက်ပါ။ အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု အကောင့်အရင်လုပ်ပါ။ မင်းမှာ တစ်ခုမှမရှိရင် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ. ပေါ်တွင်သင်ညွှန်ပြချက်ပင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Olymp Trade သရုပ်ပြအကောင့်.
သင်ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် ညွှန်ပြသည့်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ မီနူးတွင် SMA ကိုရှာဖွေပါ။ SMA ကို နှစ်ကြိမ် နှိပ်ပြီး timer ကို7နှင့် 21 သို့ပြောင်းပါ။ ပိုနားလည်စေရန် အရောင်ပြောင်းပြီး လိုင်းကို မှောင်စေသည်။ အစိမ်း7နဲ့ အနီရောင် 21 ကို ရွေးထားပါတယ်။
SMA အတွဲများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုဖွင့်နည်း
အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ဤ SMA အတွဲများသည် အချိန်တိုအတွင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။5မိနစ်မှ 15 မိနစ်ကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့်ရန်သူတို့ကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက ဇယားကွက်ကို 15 မိနစ်ထားလိုက်ပါ။
SMA7သည် SMA 21 ကိုဖြတ်တောက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် SMA7သည် SMA 21 အထက်သို့ တက်ကြွစွာ ရွေ့လျားနေပါသည်။ ၎င်းသည် တက်ကြွသောလမ်းကြောင်းကို အချက်ပြပြီး ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည်5မိနစ် သို့မဟုတ် 10 မိနစ်တွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
SMA Pairs နဲ့ ရောင်းတဲ့ ကုန်သွယ်မှုကို ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ။
SMA နှစ်ခုရဲ့ ဆုံရာကို အာရုံစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖြတ်သွားသောအခါ SMA 21 သည် SMA7အထက်တွင်ရှိသည်။ အထက်ဖော်ပြပါကဲ့သို့ အဆင်းလမ်းကြောင်းတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ကျဆင်းနေသည့်လမ်းကြောင်းကို အချက်ပြပြီး ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းအနေအထားကို ဖွင့်နိုင်သည်။
အညွှန်းအများစုကို ရွေ့လျားပျမ်းမျှအား ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ရိုးရှင်းသောရွေ့လျားပျမ်းမျှ၏သဘောတရားကို နားလည်ရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သဘောတရားကို နားလည်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောရွေ့လျားမှုပျမ်းမျှနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနည်း. ယခု ဤဗျူဟာကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ရန် သင့်အလှည့်ဖြစ်သည်။ Olymp Trade သရုပ်ပြအကောင့် ပြီးလျှင် သင်မှန်ကန်သော ကုန်သွယ်မှု မည်မျှပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ ပြီးတာနဲ့ သင်ဟာ လုံလုံလောက်လောက် ရွေ့လျားနိုင်ပါတယ်။ Olymp Trade အကောင့်အစစ်အမှန် အစစ်အမှန်ငွေနှင့်ကုန်သွယ်မှု။
Sma လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
Sma ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
ကုန်သွယ်မှုတွင် sma ကဘာလဲ
ယခင်ဆောင်းပါးOlymp Trade တွင် MACD Indicator ကို ကောင်းစွာအသုံးပြုရန် လေ့လာပါ။
နောက်ဆောင်းပါးOlymp Trade တွင် WMA ကို အသုံးပြု၍ အရည်အသွေးမြင့် ကုန်သွယ်မှုများကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
ပြန်စာတစ်စောင် ထားခဲ့ပါ။ ပြန်ကြားချက်ကို ပယ်ဖျက်ပါ။
သင့်အမည်ကို ဤနေရာတွင် ထည့်သွင်းပါ။
သင်သည် မှားယွင်းသော အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ဤနေရာတွင် ထည့်သွင်းပါ။
ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ပေးသည့်နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် ကျွန်ုပ်၏အမည်၊ အီးမေးလ်နှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို ဤဘရောက်ဆာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
Olymp Trade တွင် သင်အလွယ်တကူ အသုံးချနိုင်သော အလွယ်ကူဆုံး SMA နည်းဗျူဟာ
SMA သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသောရွေ့လျားမှုပျမ်းမျှသည် လက်ရှိလမ်းကြောင်းကိုသိရှိရန် ကုန်သည်များအသုံးပြုသည့် အခြေခံသော်လည်းကောင်း ထိရောက်သောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤညွှန်ကိန်းကိုသင်တွေ့နိုင်သည် ...
ဇွန် ၂၁၊ ၂၀၂၂
Quickler ဆိုတာ ဘာလဲ၊ Olymp Trade မှာ တူညီတဲ့ အမြတ်ငွေ ဘယ်လိုရှာမလဲ။
Olymp Trade သည် မကြာသေးမီကမှ Quickler ဖြစ်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် ငွေချေးစာချုပ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကို နှစ်သက်သော ရန်လိုသောကုန်သည်များအတွက် အထူးကောင်းမွန်သည်...
ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
Olymp Trade တွင် လွယ်ကူသော 1 မိနစ် EMA နှင့် Stochastic နည်းဗျူဟာ
ရွေ့လျားနေသောပျမ်းမျှသည် လမ်းကြောင်းသစ်နှင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ပါက အကောင်းဆုံးညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ညွှန်ကိန်းတစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အမြဲတမ်းအကြံဥာဏ်ကောင်းဖြစ်သည်...
ဧပြီလ 30 ရက် 2022 ခုနှစ်
Olymp Trade တွင် Zig Zag ညွှန်ပြချက်ကို အသုံးပြုရန် လွယ်ကူသော နည်းလမ်း ၂ ခု
Zig Zag ညွှန်ပြချက်သည် Olymp Trade ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် သင်ရှာတွေ့နိုင်ပြီး သတ်မှတ်နိုင်သည့် အဆင့်အနိမ့်ဆုံး ကုန်သွယ်မှုညွှန်ကိန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုရှာရမလဲ...
ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၂၂
အရည်အသွေးအချက်ပြမှုများရရှိရန် VFX သတိပေးချက်ကို Olymp Trade နှင့် ပေါင်းစပ်နည်း
ကျွန်ုပ်သည် ဤဆိုဒ်၏တည်ထောင်သူ Subham Sahuwala ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Olymp Trade၊ IQ Option နှင့် အခြားပလပ်ဖောင်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေသည်မှာ ၃ နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုသည် ကျွန်ုပ်၏ ထောပတ်နှင့် ပေါင်မုန့်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်သည် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ၎င်းမှတစ်ဆင့် ဝင်ငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သည် အတွေ့အကြုံရှိသော Trader တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်သွန်သင်သည့်အရာကို သင်ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
Subhamcare ၃ - ဇွန် ၂၁၊ ၂၀၂၂
Subhamcare ၃ - ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
Subhamcare ၃ - ဧပြီလ 30 ရက် 2022 ခုနှစ်
Paytm ကို အသုံးပြု၍ Olymp Trade တွင် ငွေသွင်းနည်း1
Debit ကတ်ကို အသုံးပြု၍ Olymp Trade တွင် ငွေသွင်းနည်း1
မြန်မြန်လုပ်ပါ!! ယနေ့ Olymp Trade တွင်ပါဝင်ပြီး Deposit တွင် 100% Bonus ကိုရယူပါ။
Myanmar English	 Arabic	 Chinese (China)	 Hindi	 Indonesian	 Moroccan Arabic	 Urdu	 Bengali	 Chinese (Hong Kong)	 Thai	 Korean	 Japanese	 Esperanto	 Portuguese	 Italian	 French	 Spanish	 Russian	 Malay